Abakhiqizi bamagama abakhiqizi abaphambili be-Metal & abakhiqizi bamagama ensimbi ngokwezifiso | U-Alice
Abakhiqizi abahlinzeka ngekhwalithi ephezulu yelebula ye-IPLANEPS OEM
I-Aluminium Label Badges
Amakhasimende aqhamuka e-UAE Custom Wenze ama-Aluminium Aliminium Alloy Alithu-Alice
]Ikhasimende elivela ku-United Arab Emirates elenzelwe ama-Aluminium Alloy angu-50 000 kithi. Ikhasimende lithinte nathi futhi sasinikeza imidwebo yakhe ye-Passion Design, futhi saqeda ukucaciswa kwesampula ye-NamePlate kungakapheli isonto ngokuya ngemidwebo yekhasimende. Amanani we-Alley NamePlate akhiqizwa. Ngiyabonga amakhasimende ngokusekelwa kwawo nokwethembana kwabo.
Okufanele ukwenze uma i-faux time ningshade iphenduka i-olow-alice
]Yini okufanele ngiyenze uma i-Faux Smeskin Lampshade iphenduka iphuzi? Nazi izindlela ezimbalwa zokukusiza.1. I-Bleach nge-sulfur fumigation. Skrolela ngebhulashi.2. Setha igumbi lokubhema ekhaya.3. Abakhiqizi beLapshade Professional. Ngokuvamile, iLampshade inamafutha akhethekile angahlanzwa. Ungayithenga ngokuqondile kumenzi oyithengile!
Ikhasimende elivela eJalimane elenza umsindo selwenziwe ngezifiso ngaphezu kwama-pcs ama-Aluminium Alloy Aluminiums kithi-Ali
]Ikhasimende elivela eJalimane elikhiqize umsindo selwenziwe ngokwezifiso ama-Aluminium alloy angaphezu kuka-60,000 kithi. Namuhla, amagama amakhasimende asatshalaliswe eJalimane ngamabheji. Lesi yisikhathi sesibili samakhasimende aseJalimane ukubambisana nathi. Ngiyabonga ngokuxhaswa kwakho nokwethemba kwakho.
Ungabhekana kanjani nophuzi we-lapshade-alice
]Wonke umndeni uzofaka imikhiqizo ehlukahlukene yokukhanyisa. Ukuze wenze ukukhanyisa kube nomphumela wokuhlobisa okungcono, kungokwemvelo ukukhetha ukufaka i-lampshade, futhi kungavikela nesibani othulini. I-LAMPSHAde ingahlanzwa. Kunezinhlobo eziningi zezinto zokwakha i-ningshade, kanti i-lapshade yepulasitiki iyona eyodwa yazo. Ngemuva kwesikhathi eside sokusebenzisa, abantu bangase bathole ukuthi baphenduka baphuzi, ukuze babhekane kanjani nophuzi we-lapshade yepulasitiki?
Yini amakhono okuthenga we-mpuvila eyindilinga-alice
]Ngokuthengwa kwe-ldshade eyindilinga, kunconywa ukuthi wonke umuntu anake ukuthengwa emakethe ejwayelekile, anake ukubukeka nosayizi womkhiqizo, bese ukhetha ngokuya ngesitayela somndeni. Okungenhla ukwethulwa kwendlela yokufaka i-Round Lampshade kanye namakhono okuthenga we-Round Lapshade. Ungakhetha usayizi ofanele wosayizi wosayizi ngokwezidingo zakho.
Ungayifaka kanjani i-round İtade-Alice
]Ngesikhathi sokufakwa kwe-ppravershade eyindilinga, ama-bolts wokunwebeka asetshenziselwa ukulungiswa, futhi inani nosayizi wama-bolts wokunwebeka anqunywa ngokuya ngesitampu nosayizi ophakanyisiwe. Enqubweni yokubuyisela isibani sophahla lwendilinga, kuyadingeka ukwazi inani nezikhundla ezithile zama-bolts wokunwebeka asetshenzisiwe, angavikela ngempumelelo izinkinga ezithile ezingadingekile ekushintsheni kwe-bulb.
Ungasusa Kanjani Uphahla Oludidiyelwe Isibani Somthunzi-Alice
]Ngemuva kokuthi uphahla oluhlanganisiwe luqediwe, kuyadingeka ukufaka umhlobiso wamalambu asekhaya. Isibani esihlanganisiwe sophahla siyisinqumo esivamile. Ngemuva kwalokho, ngemuva kokuba uphahla kufakiwe, uma kunephutha, kanjani ukususa umthunzi wesibani ohlanganisiwe?
Ungayifaka kanjani umthunzi ohlanganisiwe wesibani sesibani - u-Alice
]1. Ukufaka amalambu ophahla oluhlanganisiwe ngaphakathi, kufanele uqale ukhethe indawo. Kunconywa ukuthi ukhethe indawo umoya omncane.2. Bheka ikhwalithi yodonga lokuhlala uqobo ukuvikela ukukhonkotha kodonga nodonga ngesikhathi sokufakwa kophahla ophahleni oluhlanganisiwe.3. Bheka ikhwalithi yophahla lwesikhala lapho kufakwa khona isibani sophahla oluhlanganisiwe. Uma unomuzwa wokuthi akuphephile ngokwanele, kunconywa ukusebenzisa i-Steel Dragon Skeleton njengezinyathelo zokuvikela ophahleni.
Ungakuhlukanisa kanjani i-nilingsade nophahla-u-Alice
]Ukukhanyisa okuhle kungaba ngumphefumlo womhlobiso wekhaya, futhi ukukhetha kokukhanyisa kuba kubalulekile emhlobisweni wekhaya. Iphuzu eliyinhloko lokukhetha isibani sophahla ukubona ukuthi kulula ukulufaka noma sihlabezele, futhi kufanele futhi lihlanzwe. Enqubweni yokuhlanza nsuku zonke, izokonga izinkathazo eziningi, futhi kulula kakhulu ukuyifaka esikhundleni esizayo.
Ungayivula kanjani i-ningilade ejikelezayo yesibani sesiyingi esiphezulu-alice
]Isibani sophahla esiyindilinga ngokuvamile sivulwa ngokujikeleza i-ningwade; Uhlobo lwesikwele lusebenzisa ibhande; Kukhona futhi ukuqhathanisa i-lapshade yengilazi, eboshwe ngamaphetho amathathu ngaphakathi, futhi i-lambu lizodonswa phansi kanzima; Amanye amalambu ophahleni anamathele ophahleni, futhi i-suiling gusset kufanele isuswe ukuze ingene esikhundleni. Donsa isibani ngobunono ukuze ubone iziphethu, ucindezele enye yeziphethu ngesandla sakho bese uyikhipha, bese ukhipha ezinye iziphethu.
Ungayisusa Kanjani i-LAMPSHADE ku-Ceiling-Alice
]Ukukhanyisa iso efenisha. Emhlobisweni wekhaya, indima yamalambu ayikhawulelwe ekukhanyiseni, kodwa futhi idlala indima yokuhlobisa.
Ungabhekana kanjani ne-Yellow Whicshade ekhaya? -Alice
]Lapho ukhetha izibani nezibani, iningi lesikhathi, wonke umuntu uzobheka izibani ezinkulu kuqala, kodwa kwesinye isikhathi izibani ezinkulu azinakusebenza njengamalambu amancane. Yize amalambu amancane engabi kangako ngokwendawo, imiphumela yazo yokukhanyisa ilungele kakhulu ukuthi isetshenziswa ekhaya, futhi manje izibani azizange zikhuphule izinketho zokubukeka kwama-aesthetics, kodwa futhi zithuthukise isembozo samalambu.